Googlelọ ahịa Google, Microsoft, Facebook na Instagram | David Bridburg ~ Biputere Osisi Oge A
Okechukwu Ikwerre June 6, 2021 June 6, 2021
Ọgba agba ndị David Bridburg dere
Akụkọ ihe osise m laghachiri na 2006 na echiche dị mfe iji bụrụ onye na-ese foto dijitalụ. Ọrụ m na-ebupụta na ọmụmụ onwe onye na 2012. Na 2014 My Postmodernism amalite ịmị mkpụrụ.
N'ime abalị site David Bridburg
A na-ekpughere ọkpụkpụ m, achọghị m ịbụ onye okike na-agụ agụụ.
N'ime ọnwa isii gara aga m na-eke mkpọsa azụmahịa. Nke mbụ na Shozụ ahịa Microsoft, wee rụọ ọrụ na Facebooklọ Ahịa Facebook na Instagram. Na-esote Google Shopping ugbu a bụ ọrụ dị n'etiti.
Na mmeputakwa Mbipụta azụmahịa anyị na-adabere na oge Krismas iji mepụta ezigbo ROI. Bido n’ọnwa Nọvemba, ihe m ga-emefu.
Mara usoro nke na-eke na ijikwa ịzụ ahịa mkpọsa m tụgharịrị ka ọrụ ahịa.
Toptal bụ onye m na-arụrụ ọrụ. Ma olee ebe ịmalite? Abụ m onye njikwa azụmaahịa Google, onye njikwa azụmaahịa Microsoft na njikwa ụlọ ahịa Instagram Instagram. Ee enwere m ọtụtụ ihe m ga-amụta. Gịnị mere m ga-eji rụọ ọrụ? N'ihi na m hụrụ n'anya na-amụ banyere nke a ma na-eke maka ụlọ ahịa ndị a.
Ahụmahụ m dị ka ndị na-ere onwe ha na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na nnukwu aggregator. Nke a pụtara ọrụ ole na ole. Ihe oriri m chọrọ nkwado akwụkwọ ntuziaka pụrụ iche. Enwere m anya anya nke ikpuru na anya nnụnụ nke usoro ahụ.
Ndị ahịa Toptal ga-enweta ezigbo ọrụ na nlekọta n'aka m. Aghọtara m na m bụ ọrụ na-aga n'ihu na ọtụtụ ihe m ga-amụta. Withrụ ọrụ na Toptal ga-abụ nnukwu ohere na nsọpụrụ maka m.
Enwere ihe achọrọ maka blọgụ a enwere m nsogbu nzukọ. Ikekwe n'ihi na m dị ọhụụ n'ọhịa. Ihe achọrọ ka m jikọta na peeji nke Toptal na ọpụrụiche m. Amachaghị m etu Toptal si kọwaa ahụmịhe m. Iji mezuo ihe achọrọ m ga-agbakwunye njikọ ahụ AKW FKWỌ AKWREKWỌ AKWREKWỌ AKWREKWỌ. Ime ihe n'eziokwu achọrọ m enyemaka na aha ọrụ m. Na ahia ahia n'ozuzu o yiri ka enwere otutu aha.